DoubleMap GPS စနစ် | Android အတွက်အခမဲ့ APK ကိုဒေါင်းလုပ်
ပင်မစာမျက်နှာ » ဂျီပီအက်စ် & ခရီးသွား Apps ကပ » DoubleMap GPS စနစ်
DoubleMap GPS စနစ် APK ကို
DoubleMap system.DoubleMap ခြေရာခံတစ်ဦးကို real-time GPS စနစ်ဘတ်စ်ကားမြင်းစီးသူရဲသည်သင်၏မြို့အဘို့ကိုမှန်ကန်ကာလ၌ဘတ်စ်ကားများ၏နေရာအတိအကျကိုခြေရာခံရန်ခွင့်ပြုသည်ဖြစ်ပါတယ်။ ငါတို့သည်သင်တို့၏တစ်ရက်ဘယ်လောက်အလုပ်များကိုငါသိ၏။ တစ်ဦးဘတ်စ်ကားမှတ်တိုင်မှာစောင့်ဆိုင်းနေပါကတစ်မိနစ်မဖြုန်းတီးပါနဲ့။
အန်းဒရွိုက် app ကိုအင်္ဂါရပ်တွေ:
- မြေပုံပေါ်တွင်စစ်မှန်သောအချိန်အတွက်ဘတ်စ်ကား View
- တိကျတဲ့လမ်းကြောင်းများနှင့်ဆက်စပ်နေသောမှတ်တိုင်များ View
- ဂျီပီအက်စ် enabled လျှင်သင့်ရဲ့လက်ရှိတည်နေရာ View
- ထိုသို့သောနှောင့်နှေးခြင်းနှင့် re-လမ်းကြောင်းအဖြစ်လက်ရှိဘတ်စ်ကားစနစ်က related ကြေညာချက်များ View
- အထူးသက Android device များအတွက်လုပ်, ဒါကြောင့် DoubleMap ဘတ်စ်ကား tracker တွင်မိုဘိုင်းက်ဘ်ဆိုက်ထက်ချောင်
DoubleMap ဘတ်စ်ကားခြေရာခံခြင်းနှင့်အတူဘတ်စ်ကားနှင့်လွန်းစနစ်များတချို့က Lafayette ၏ CityBus, Indiana ပြည်နယ်တက္ကသိုလ် (IU သည်), ဂျော့တောင်းတက္ကသိုလ်, Bloomington Transit, စင်စင်နာတီတက္ကသိုလ် (UC) နှင့်ကိုလံဘီယာမစ်ဆူရီတို့ပါဝင်သည်။ ပိုများသောအကူးအပြောင်းစနစ်များကိုလူအပေါင်းတို့သည်အချိန် DoubleMap မှဆက်ပြောသည်ခံရကြသည်!
( "DoubleMap" အတွက်ရှာ "နှစ်ချက်မြေပုံ" အတွက်ရှာထက်ပိုမိုထိရောက်သောကြောင်း ကျေးဇူးပြု. သတိပြုပါ။ )
* အသွားအလာခလုတ်် / ပိတ်
လမ်းကြောင်းများရှာဖွေရန် * နိုင်ခြင်း / တစ်ဦးချင်းစီစနစ်အတွင်းရပ်
* မှန်ဘီလူးမြင်ကွင်းထဲမှာလက်ရှိတည်နေရာနှင့် / သို့မဟုတ်လမ်းကြောင်းများကြည့်ရှုရန်
* hyperlink များကြည့်ရှုရန်နိုင်သူဖြစ်ရမည်
* အကောက်ခွန်ဘတ်စ်ကားအမြင် (အားလုံးစနစ်များများအတွက်ရရှိနိုင်မပါ)
* Accessibility တိုးတက်မှု
DoubleMap GPS စနစ်
5.30 ကို MB